अभिनेत्री पुजा शर्माले नेपालमा ७२ जिल्ला, १४ प्रदेश छन भन्दा, भइन यस्ता यस्ता ट्रोलको शि’कार !(पूरा पढ्नुहोस ) – Jagaran Nepal
अभिनेत्री पुजा शर्माले नेपालमा ७२ जिल्ला, १४ प्रदेश छन भन्दा, भइन यस्ता यस्ता ट्रोलको शि’कार !(पूरा पढ्नुहोस )
काठमाडौं – कलाकार पूजा शर्मा ट्रोलको शि’कार बनेकी छिन् । नेपालमा कति जिल्ला छन् भन्ने समेत भन्न नसकेपछि उनको चौतर्फी वि’रोध भएको छ । प्राइम टाइम्सको भिडियो अन्तर्वार्तामा पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूजाले नेपालमा १४ जिल्ला भएको बताएकी थिइन ।
उनलाई पत्रकार सुवेदीले सोधेका थिए – नेपालमा यतिखेर कतिवटा प्रदेश छन् ? यसको जवाफमा कलाकार पूजा शर्माले ७२ वटा भएको भन्दै अ’कमका’एकी थिइन् । यो प्रश्नको उत्तर दिन नसकेपछि उनलाई सुवेदीले नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर प्रश्न सोधेका थिए । पूजाले नेपालमा १४ वटा जिल्ला भएको उत्तर दिएकी थिइन् । यो भिडियो फुटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ भने नेपाली कलाकारको अ’ज्ञानतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
प्राइम टिभीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको उक्त भिडियो हटाइएको छ । भिडियो किन हटाइयो भन्ने खुलाइएको छैन के थियो भिडियोमा अन्तर्वार्ता दिन पुगेकी पूजासँग प्रकाश सुवेदीले लामो समय कुरा गरेका थिए । कुराकानीका सिलसिलामा पत्रकार सुवेदीले एकछिन बाहिरी कुरा गरौं न भन्दै राजनीतिक नेताहरुका बारेमा सोध्छन् ।
उनले नेपालका अर्थमन्त्रीको नाम सोध्छन् । पूजाले उत्तर दिन नसकेपछि पूर्वसञ्चारमन्त्रीको नाम सोध्छन् । सुवेदीको प्रश्नको उत्तरमा पूजाले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छिन् । कार्यक्रममा पूजालाई हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भएको बताउँछन् । उनलाई सोधिएको ५ मन्त्रीको नाम पनि पूजाले भन्न सक्दिनन् । पत्रकारले पुनः ३ मन्त्रीको नाम भन्न अनुरोध गर्छन् । जवाफमा पूजाले बामदेव गौतम, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नाम लिन्छिन् ।
पूजालाई मन्त्रीको नाम भन्न गाह्रो लागेपछि सुवेदीले सजिला प्रश्न भन्दै जिल्लाको नाम र प्रदेशका नाम सोधेका थिए । पूजाले नेपालमा १४ जिल्ला भएको बताएकी थिइन् । नेपालमा प्रदेश भने ७२ वटा भएको भन्दै अकमकाएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनले राजनीतिप्रति कुनै चासो नभएको पनि प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । नेपाली कलाकारलाई सामान्य ज्ञानसमेत नभएको भन्दै पूजा शर्मालाई ट्रोल बनाइएको छ । यी कलाकार बेलाबेलामा आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण वि’वा’दमा आइरहन्छिन् ।